यहोवाले रोज्नुभएका गोठालाहरूप्रति आज्ञाकारी हुनुहोस् | अध्ययन
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इलोको ईवी उज्बेक उन्डुबेली उरुन्ड् एफिक एस्टोनियन ओरोमो कम्बोडियन काजाक किकुयु किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डाँग्मे डेनिश ताहिटी त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली नोंगा पंगासिनन् पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बिकोल बुल्गेरियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेन्डा मले मालागासी माल्टिज मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ वायुनाइकी वारे-वारे वोलाइटा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सिंहला सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन
“जसले तिमीहरूबीच अगुवाइ लिइरहेका छन्‌, तिनीहरूप्रति आज्ञाकारी होओ र तिनीहरूको अधीनमा बस, किनकि . . . तिनीहरूले तिमीहरूको हेरचाह गरिरहेका छन्‌।”—हिब्रू १३:१७.
एल्डरहरूले परमेश्वरको बगालको गोठालो कसरी गर्नुपर्छ?
भेडाहरूले उपगोठालाहरूको कुरा किन सुन्नुपर्छ?
नेतृत्व लिने भाइहरूको कमीकमजोरीलाई निहुँ बनाएर गनगन गर्नु वा तिनीहरूले दिएको धर्मशास्त्रीय सल्लाह इन्कार गर्नुहुँदैन, किन?
१, २. यहोवा परमेश्वरले आफूलाई किन गोठालोसित तुलना गर्नुभएको छ?
यहोवा परमेश्वर आफूलाई गोठालोसित तुलना गर्नुभएको छ। (इज. ३४:११-१४) यसले गर्दा उहाँ कस्तो किसिमको परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर बुझ्न हामीलाई अझै सजिलो भएको छ। मायालु गोठालोले आफ्नो भेडाको ज्यान जोगाउन उसको हेरविचार गर्छ। उसले आफ्नो भेडालाई हरियो घाँसपात भएको अनि प्रशस्त पानी भएको ठाउँमा चराउन लैजान्छ। (भज. २३:१, २) दिनरात नभनी आफ्नो बगालको हेरचाह गर्छ। (लूका २:८) जङ्गली जनावरहरूबाट जोगाउँछ। (१ शमू. १७:३४, ३५) भर्खरै जन्मेको पाठोलाई माया गरेर बोक्छ। (यशै. ४०:११) अनि हराएको भेडालाई खोज्छ र चोटपटक लागेको भेडालाई मलहमपट्टी लगाइदिन्छ।—इज. ३४:१६.
२ पुरातन समयमा यहोवाका जनहरू पशुपालन र खेतीपाती गर्थे। त्यसैले यहोवाले आफूलाई किन मायालु गोठालोसित तुलना गर्नुभयो भनेर बुझ्न तिनीहरूलाई गाह्रो भएन। बगाल राम्रो हुने हो भने गोठालोले तिनीहरूको राम्रो रेखदेख गर्नुपर्छ भनेर यहोवाका जनहरूलाई थाह थियो। त्यसैगरि मानिसहरूलाई पनि यहोवाको डोऱ्याइ र निर्देशन चाहिन्छ। (मर्कू. ६:३४) त्यस्तो डोऱ्याइ नपाएको खण्डमा तिनीहरूले सही र गलत छुट्टयाउन सक्दैनन्‌ अनि “गोठाला नभएका भेडाहरूझैं” तितरबितर हुन सक्छन्‌। (१ राजा २२:१७) तर यहोवाले आफ्ना जनहरूको एकदमै राम्रो हेरविचार गर्नुहुन्छ; तिनीहरूलाई चाहिने हरेक कुरा जुटाइदिनुहुन्छ।
३ यहोवा किन गोठालोजस्तै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी पनि बुझ्न सक्छौं। अहिले पनि उहाँले गोठालोले जस्तै आफ्ना जनहरूको हेरविचार गर्नुहुन्छ। उहाँले कसरी हाम्रो हेरविचार गरिरहनुभएको छ र हाम्रा आवश्यकताहरू पूरा गरिरहनुभएको छ, आउनुहोस् हेरौं। अनि यहोवाको डोऱ्याइबाट पूरापूर लाभ उठाउन हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो पनि विचार गरौं।
असल गोठालोले उपगोठालाहरूको प्रबन्ध गर्नुहुन्छ
४. येशू ख्रीष्ट यहोवाका भेडाहरूको कसरी देखभाल गर्नुहुन्छ?
४ यहोवा परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई ख्रीष्टियन मण्डलीको “शिर” नियुक्त गर्नुभएको छ। (एफि. १:२२, २३) येशू “असल गोठालो” हुनुहुन्छ। आफ्नो बुबाले जस्तै उहाँ पनि आफ्ना भेडाहरूलाई माया गर्नुहुन्छ अनि तिनीहरूको देखभाल गर्नुहुन्छ। उहाँले ‘भेडाहरूको निम्ति आफ्नो ज्यान समेत अर्पण गर्नुभयो।’ (यूह. १०:११, १५) उहाँले दिनुभएको छुडौतीको बलिदान सबै मानिसहरूको लागि कत्ति ठूलो आशिष्‌ हो! (मत्ती २०:२८) “[येशूमाथि] विश्वास गर्ने हरेक नाश नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्” भनेर नै यहोवाले त्यस्तो प्रबन्ध गर्नुभएको हो।—यूह. ३:१६.
५, ६. (क) येशूले आफ्ना भेडाहरूको हेरविचार गर्न कसलाई नियुक्त गर्नुभएको छ? अनि यो प्रबन्धबाट लाभ उठाउन भेडाहरूले के गर्नुपर्छ? (ख) एल्डरहरूको अधीनमा बस्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण के हो?
५ येशू ख्रीष्ट नै आफ्नो गोठालो हुनुहुन्छ भनेर उहाँका भेडाहरूले कसरी देखाउँछन्‌? येशूले भन्नुभयो: “मेरा भेडाहरूले मेरो सोर सुन्छन्‌ र म तिनीहरूलाई चिन्छु अनि तिनीहरू मेरो पछि लाग्छन्‌।” (यूह. १०:२७) असल गोठालोको सोर सुन्नुको मतलब हरेक कुरामा उहाँको डोऱ्याइअनुसार चल्नु हो। यसमा उहाँले नियुक्त गर्नुभएका उपगोठालाप्रति आज्ञाकारी हुनु पनि समावेश छ। आफूले सुरु गरेको कामलाई प्रेषितहरू अनि चेलाहरूले निरन्तरता दिनेछन्‌ भनेर येशूले बताउनुभयो। तिनीहरूले ‘येशूका साना भेडाहरूलाई खुवाउने’ अनि ‘सिकाउने’ थिए। (मत्ती २८:२०; यूहन्ना २१: १५-१७ पढ्नुहोस्) सुसमाचार फैलिंदै गएपछि चेलाहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गयो अनि मण्डली स्थापना भयो। यी मण्डलीहरूको गोठालो गर्न येशूले परिपक्व पुरुषहरूको प्रबन्ध गर्नुभयो।—एफि. ४:११, १२.
६ एफिससमा भएका प्रथम शताब्दीका निरीक्षकहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रेषित पावलले यसो भने: “मण्डलीलाई गोठालोले झैं डोऱ्याउन पवित्र शक्तिले तपाईंहरूलाई यस बगालमा निरीक्षक नियुक्त गरेको छ।” (प्रेषि. २०:२८) अहिले पनि एल्डरहरू पवित्र शक्तिद्वारा नै नियुक्त हुन्छन्‌। किनभने तिनीहरू परमेश्वरद्वारा प्रेरित धर्मशास्त्रमा तोकेको योग्यताको आधारमा नियुक्त हुन्छन्‌। त्यसैले एल्डरहरूप्रति आज्ञाकारी हुँदा हामीले महान्‌ गोठाला यहोवा र येशू ख्रीष्टलाई आदर देखाइरहेका हुन्छौं। (लूका १०:१६) हामी एल्डरहरूको अधीनमा बस्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण यही नै हो। तर अरू कारणहरू पनि छन्‌।
७. यहोवासित घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न एल्डरहरूले हामीलाई कसरी मदत गर्छन्‌?
७ एल्डरहरूले सँगी विश्वासीहरूलाई सधैं नै बाइबलमा आधारित प्रोत्साहन र सल्लाह दिन्छन्‌। भाइबहिनीहरूले आफ्नो जीवन यसरी-यसरी बिताउनुपर्छ भनेर तिनीहरू एक-एक नियम तोक्दैनन्‌। (२ कोरि. १:२४) बरु सँगी ख्रीष्टियनहरूलाई धर्मशास्त्रीय सल्लाह दिएर सही निर्णय गर्न मदत गर्छन्‌। यसरी तिनीहरू मण्डलीमा एकता र शान्ति कायम राख्न मदत गर्छन्‌। (१ कोरि. १४:३३, ४०) एल्डरहरूले “तिमीहरूको हेरचाह गरिरहेका छन्‌” भनेर बाइबल बताउँछ। यसको मतलब एल्डरहरू मण्डलीका प्रत्येक सदस्यलाई यहोवासित घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न मदत दिन्छन्‌। तिनीहरू “गलत कदम” चाल्न लागेका वा चालिसकेकाहरूलाई मदत गर्न तुरुन्तै अघि सर्छन्‌। (गला. ६:१, २; यहू. २२) त्यसोभए ‘अगुवाइ लिइरहेकाहरूप्रति हामी आज्ञाकारी हुनु’ पर्दैन र?—हिब्रू १३:१७ पढ्नुहोस्।
८. एल्डरहरू आफ्नो बगाललाई कसरी जोगाउँछन्‌?
८ प्रेषित पावल मायालु गोठालो थिए। तिनले कलस्सीमा भएका आफ्ना भाइबहिनीहरूलाई यस्तो चेतावनी दिए: “होसियार बस, कसैले तिमीहरूलाई मानव दर्शनका साथै खोक्रो अनि छली विचारधाराहरूद्वारा आफ्नो शिकार नबनाओस्, किनकि यस्ता कुराहरू मानिसहरूको परम्परा अनि संसारका आधारभूत कुराहरूमा आधारित हुन्छन्‌, ख्रीष्टको शिक्षामा होइन।” (कल. २:८) एल्डरहरूले धर्मशास्त्रीय सल्लाह दिंदा तिनीहरूप्रति आज्ञाकारी हुनुपर्ने अर्को कारण हामी यसमा पाउछौं। भाइबहिनीहरूको विश्वासलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कुरादेखि एल्डरहरू उनीहरूलाई सचेत गराउँछन्‌। प्रेषित पत्रुसले पनि आफ्ना सँगी ख्रीष्टियनहरूलाई “झूटा भविष्यवक्ताहरू” अनि “झूटा शिक्षकहरू”-देखि होसियार रहनू भनेर चेतावनी दिए। किनभने तिनीहरूले कमजोर ख्रीष्टियनहरूलाई यहोवाबाट तर्काउन सक्थे। (२ पत्रु. २:१, १४) अहिले पनि आवश्यक पऱ्यो भने एल्डरहरूले त्यस्तै चेतावनी दिनुपर्ने हुन्छ। एल्डरहरू परिपक्व ख्रीष्टियन पुरुष भएकोले तिनीहरूसित धेरै अनुभव हुन्छ। साथै, धर्मशास्त्रीय शिक्षामा पोख्त भएको अनि अरूलाई स्वस्थकर शिक्षा दिन सक्षम भएको कुरा तिनीहरूले एल्डर हुनुअघि नै देखाइसकेका हुन्छन्‌। (१ तिमो. ३:२; ती. १:९) परिपक्वता, सन्तुलन अनि बाइबलआधारित बुद्धिले गर्दा तिनीहरू भाइबहिनीलाई उपयुक्त निर्देशन दिन सक्छन्‌।
गोठालोले आफ्नो बगालको रक्षा गरेझैं एल्डरहरू आफ्नो जिम्मामा रहेकाहरूको रक्षा गर्छन्‌ (अनुच्छेद ८ हेर्नुहोस्)
असल गोठालोले भेडालाई खुवाउँछन्‌ र सुरक्षा दिन्छन्‌
९. अहिले ख्रीष्टियन मण्डलीलाई कसरी खुवाइन्छ र निर्देशन दिइन्छ?
९ यहोवा आफ्नो सङ्गठनमार्फत विश्वभरिका हाम्रा सबै भाइबहिनीहरूलाई प्रशस्त मात्रामा आध्यात्मिक भोजन दिनुहुन्छ। प्रायजसो हामी धर्मशास्त्रीय सल्लाहहरू विभिन्न प्रकाशनहरूमार्फत पाउँछौं। कहिलेकाहीं भने सीधै मण्डलीका एल्डरहरूमार्फत पाउँछौं। एल्डरहरूले त्यस्तो सल्लाह सङ्गठनबाट आएको पत्रमार्फत वा परिभ्रमण निरीक्षकहरूमार्फत पाउँछन्‌। यसरी भेडाहरूले स्पष्ट निर्देशन पाउँछन्‌।
१०. कुनै भेडा बगालबाट तर्कियो भने मायालु एल्डरले के गर्नुपर्छ?
१० मायालु गोठालोले आफ्नो बगालको देखभाल गर्छ अनि सुरक्षा दिन्छ। ख्रीष्टियन एल्डरहरूले विशेषगरि विश्वासमा कमजोर भएका वा गम्भीर गल्ती गरेकाहरूलाई चासो देखाउँछन्‌। (याकूब ५:१४, १५ पढ्नुहोस्) यस्ता व्यक्तिहरूमध्ये कोही-कोही त बगालबाट तर्किसकेका हुन सक्छन्‌ अनि ख्रीष्टियन गतिविधिमा पनि भाग लिन छोडिसकेका हुन सक्छन्‌। यस्तो अवस्थामा हराएका ती भेडाहरूलाई आफ्नो बगाल अर्थात्‌ ख्रीष्टियन मण्डलीमा फर्कन मायालु एल्डरले सक्दो प्रयास गर्दैनन्‌ र? पक्कै पनि गर्छन्‌। येशूले यसो भन्नुभयो: “स्वर्गमा बस्नुहुने मेरो बुबा यी सानाहरूमध्ये कसैले पनि बाटो बिराएको चाहनुहुन्न।”—मत्ती १८:१२-१४.
उपगोठालाहरूको कमीकमजोरीलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ?
११. कसै-कसैलाई किन एल्डरहरूको नेतृत्व स्वीकार्न गाह्रो लाग्न सक्छ?
११ यहोवा र येशू त्रुटिरहित गोठाला हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूले मण्डलीको हेरचाह गर्न जिम्मेवारी सुम्पनुभएका उपगोठालाहरू भने त्रुटिपूर्ण छन्‌। त्यसैले कसै-कसैलाई एल्डरहरूको नेतृत्व स्वीकार्न गाह्रो लाग्न सक्छ। यस्ता व्यक्तिहरूले यस्तो तर्क गर्न सक्छन्‌: ‘तिनीहरू पनि त हामी जस्तै त्रुटिपूर्ण मानिस हुन्‌ नि! हामीले तिनीहरूको सल्लाह किन सुन्नु पऱ्यो?’ एल्डरहरू त्रुटिपूर्ण छन्‌ भन्ने कुरा ठीक हो। तर हामीले तिनीहरूको कमीकमजोरीलाई मात्र ध्यान दिनु हुँदैन।
१२, १३. (क) विगतमा यहोवाका जनहरूको नेतृत्व लिने व्यक्तिहरूले कस्ता गल्तीहरू गरे? (ख) आफूले गहन जिम्मेवारी सुम्पेका व्यक्तिहरूको कमीकमजोरीबारे यहोवाले बाइबलमा किन लेख्न लगाउनुभयो?
१२ विगतमा यहोवाले आफ्ना जनहरूलाई डोऱ्याउन छान्नुभएका व्यक्तिहरूले गरेको गल्तीबारे पनि धर्मशास्त्रमा स्पष्टसित बताइएको छ। उदाहरणका लागि, यहोवाले राजा दाऊदलाई इस्राएल राष्ट्रको नेतृत्व लिन राजाको रूपमा छान्नुभएको थियो। तर तिनले अर्काकी पत्नीसित अवैध यौनसम्बन्ध राखे र तिनका पतिलाई मार्न लगाए। (२ शमू. १२:७-९) प्रेषित पत्रुसको उदाहरण पनि विचार गर्नुहोस्। तिनले प्रथम शताब्दीको ख्रीष्टियन मण्डलीमा ठूलठूला जिम्मेवारी पाएका थिए। तैपनि तिनले गम्भीर गल्तीहरू गरे। (मत्ती १६:१८, १९; यूह. १३:३८; १८:२७; गला. २:११-१४) आदम र हव्वापछि येशूबाहेक कोही पनि त्रुटिरहित मानिस जन्मेको छैन।
१३ आफूले गहन जिम्मेवारी सुम्पेका व्यक्तिहरूको कमीकमजोरीबारे यहोवाले किन बाइबलमा लेख्न लगाउनुभयो? एउटा कारण हो: आफ्ना जनहरूलाई डोऱ्याउन उहाँ त्रुटिपूर्ण मानिसहरू चलाउन सक्नुहुन्छ भनेर देखाउन। वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँले आफ्ना जनहरूलाई डोऱ्याउन सधैं नै त्रुटिपूर्ण मानिसहरूलाई नै चलाउँदै आउनुभएको छ। त्यसैले हामीले नेतृत्व लिने भाइहरूको कमीकमजोरीलाई निहुँ बनाएर गनगन गर्नु वा तिनीहरूको नेतृत्व इन्कार गर्नुहुँदैन। हामीले ती भाइहरूलाई आदर गरेको अनि तिनीहरूप्रति आज्ञाकारी भएको यहोवा चाहनुहुन्छ।—प्रस्थान १६:२, ८ पढ्नुहोस्।
१४, १५. विगतमा यहोवाले आफ्ना जनहरूलाई निर्देशन दिन जुन तरिका चलाउनुभएको थियो, त्यसबाट हामी के सिक्न सक्छौं?
१४ आज पनि हामीहरू नेतृत्व लिनेहरूप्रति आज्ञाकारी हुनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। विगतमा कठिन समय आइपर्दा यहोवाले आफ्ना जनहरूलाई कसरी निर्देशन दिनुभयो, विचार गर्नुहोस्। इस्राएलीहरूले मिश्र देश छोड्दा तिनीहरूलाई निर्देशन दिन यहोवाले मोशा र हारूनलाई चलाउनुभयो। इस्राएलीहरूले दसौं विपत्तिबाट जोगिन ती निर्देशनहरू पालन गर्नुपर्थ्यो। तिनीहरूले विशेष भोजन खानुपर्थ्यो; बलि चढाएको भेडाको रगत ढोकाको चौकोसको माथिल्लो भाग अनि दुवैतिरका खामाहरूमा छ्याप्नुपर्थ्यो। यहोवाले यो निर्देशन दिन आकाशवाणी त गर्नुभएन। इस्राएलीहरूले मोशाबाट विशेष निर्देशन पाएका बूढा प्रधानहरूको कुरा सुन्नुपर्थ्यो। (प्रस्थ. १२:१-७, २१-२३, २९) त्यतिबेला यहोवाले आफ्ना जनहरूलाई निर्देशन दिन मोशा अनि बूढा प्रधानहरू चलाउनुभयो। अहिलेचाहिं एल्डरहरूलाई चलाउनुहुन्छ।
१५ यहोवाले आफ्ना जनहरूलाई जोगाउन मानिसहरू वा स्वर्गदूतहरू चलाउनुभएको थुप्रै बाइबल विवरण तपाईंलाई याद छ होला। हो, यहोवाले आफ्नो अख्तियार अरूलाई सुम्पनुभयो। यहोवाका सन्देशवाहकहरू उहाँको नाममा बोल्थे अनि खतरनाक परिस्थितिबाट जोगिन के गर्नुपर्छ भनेर तिनीहरूले नै परमेश्वरका जनहरूलाई बताउँथे। यहोवाले आरमागेडोनमा पनि त्यसै गर्नुहुनेछ भनेर के हामी विश्वस्त हुनु पर्दैन र? त्यति मात्र होइन, यहोवाको प्रतिनिधित्व गर्ने अनि उहाँको सङ्गठनमा नेतृत्व लिने आजका एल्डरहरू पनि आफूले पाएको अख्तियारको दुरुपयोग नगर्न उत्तिकै होसियार हुनुपर्छ।
“एउटै बगाल . . . एकै जना गोठालो”
१६. हामीले सुन्नुपर्ने “शब्द”-मा के-के समावेश छन्‌?
१६ यहोवाका जनहरू “एकै जना गोठालो” येशू ख्रीष्टको अधीनमा रहेको “एउटै बगाल” हो। (यूह. १०:१६) “यस युगको आखिरी समयसम्म . . . सधैंभरि तिमीहरूसितै” हुनेछु भनेर येशूले बताउनुभयो। (मत्ती २८:२०) सैतानको संसारलाई विनाश गर्नुअघि जे-जति घटनाहरू हुन्छन्‌, ती सबैलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार येशूसित छ। किनभने उहाँ स्वर्गको राजा हुनुहुन्छ। त्यो समय आउनुअघि हामी यहोवाको सङ्गठनमा कसरी एकताबद्ध हुन अनि सुरक्षित रहन सक्छौं। त्यसको लागि हामीले आफ्नो ‘पछिल्तिरबाट आउने शब्द’ ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। त्यो शब्दले हामीलाई कुन बाटो जानुपर्छ भनेर सिकाउँछ। ती शब्दहरूमा पवित्र शक्तिले बाइबलमार्फत अनि यहोवा र येशूले आफ्ना उपगोठालाहरूमार्फत भन्ने कुराहरू समावेश छन्‌।—यशैया ३०:२१; प्रकाश ३:२२ पढ्नुहोस्।
बुबा वा आमा मात्र भएको परिवारलाई हानिकारक सङ्गतबाट जोगाउन एल्डरहरू कडा मेहनत गर्छन्‌ (अनुच्छेद १७, १८ हेर्नुहोस्)
१७, १८. (क) अहिले परमेश्वरका जनहरू कस्तो खतरामा परेका छन्‌? तर हामी कुन कुरामा ढुक्क हुन सक्छौं? (ख) अर्को लेखमा हामी के छलफल गर्नेछौं?
१७ सैतान “कसलाई निलूँ भनेर गर्जने सिंहझैं” घुमेर हिंडेको छ भनेर बाइबल बताउँछ। (१ पत्रु. ५:८) भोकाएको जङ्गली जनावरजस्तै सैतान पनि कमजोर अनि बगालबाट तर्किएका व्यक्तिहरूलाई झम्टन ठिक्क परेको छ। ऊ उपयुक्त मौका पर्खिरहेको छ। त्यसैले पनि हामी बगालसँगै रहनु अनि हाम्रो “जीवनको रेखदेख गर्ने” गोठालाहरूको माझमा रहनु एकदमै जरुरी छ। (१ पत्रु. २:२५) महासङ्कष्टबाट बच्नेहरूबारे प्रकाश ७:१७ यसो भन्छ: “थुमाले [येशूले] जीवन दिने पानीको मुहानसम्मै तिनीहरूलाई गोठालोले झैं डोऱ्याउनुहुनेछ। अनि परमेश्वरले तिनीहरूको आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ।” कत्ति राम्रो प्रतिज्ञा!
१८ अहिलेसम्मको छलफलमा ख्रीष्टियन एल्डरहरूले उपगोठालाहरूको रूपमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्‌ भनेर हामीले बुझ्यौं। त्यसोभए आफूले येशूका भेडाहरूलाई राम्ररी देखभाल गरेको छ कि छैन भनेर एल्डरहरू कसरी पक्का हुन सक्छन्‌? यस प्रश्नको जवाफ हामी अर्को लेखमा पाउनेछौं।